Kufamba Kwemhuri | Seymour, IN | Jackson County Vashanyi Center
Dzvanya kune zviitiko zvemwedzi uno muJackson County!
Chengetedza izvo zvitsva muJackson County.
Dzvanya pano kuti uone Mafestiro & Zviitiko zvedu.
Mhemberero & Zviitiko zvedu
Wona zviitiko zvese zvakasarudzika nekusarudza zuva mukarenda kana nekudzvanya bhari tsvuku yezere runyorwa.
Nemuunganidzwa wakakura wenzvimbo dzekunze dzekutandarira uye zviitiko zvemhuri zvine hushamwari, vashanyi vanogona kuwana zviitiko zvakasiyana nekutibata isu paJackson County Visitor Center. Kuita rwendo rwuri nyore kuumba chero nzira, isu tiri awa kumaodzanyemba kweIndianapolis, awa kuchamhembe kweLouisville, KY, awa kubva kuCincinnati, OH, uye hop-skip-uye-a-kusvetuka kubva kuBloomington neNashville, Indiana. Ingotora Exit makumi mashanu kubva kuInterstate 50 uye uuye kuzotiona. Huwandu hwedu hwakafara hwezviitiko zvemhuri zvine hushamwari nemitambo, zvinoita kuti iwe ugadzire nguva dzisingakanganwike. Tinokukurudzira kuti utiite yako yekuenda kune ruzivo rwese rwaungade kuronga yako inotevera adventure kuJackson County, Indiana. Dzvanya apa kuti uwane diki gwara kuJackson County!
Maguta Edu Madiki
Yakaiswa muna 1850, iyi nharaunda diki inodada nenhaka yayo. Kugara mumigwagwa yenyika 58 ne135, unogona kufamba kubva kuFreetown-Pershing Museum, kumusha kune hupfumi hwakawanda hunosanganisira imwe ye7 Jackson County bison, kuenda kuchitoro che ice cream kana Sgt. Rick's American Cafe uye BBQ. Ongorora nyika yakanaka kune Munyu weSalt Creek Winery uye tora kuravira kwavo kunopa mubairo-waini ivo vachitora mune yakanaka mamiriro ekuona.
Iyi nharaunda inopemberera kuti ndiyo chigaro chedunhu uye imba kune yakapfuma nhoroondo nedare redzimhosva kuve matriarch kune ese enhoroondo nzvimbo munzvimbo dzese munharaunda nenzvimbo dzakatenderedza. Nharaunda inonakidzwa nekuve pamba kune mubairo-unohwina Jackson County Fair. Brownstown inogara paUS50, inova mugwagwa-mumhenderekedzo yegungwa uye nzira huru yekuenda kumabvazuva nekumadokero. Ndigere mumakomo anoyevedza eJackson-Washington State Sango uye Hoosier National Sango, ingori maminetsi gumi kubva kuI-10.
Kungokurumidza kusvetuka kubva paI-65 uye US 31, Crothersville iri kumba kune avo vanodada Tiger uye yavo yegore Mutambo Mutsvuku, Muchena uye Bhuruu. Mutambo uyu unopemberera kuda nyika uye American Flag. Yakatanga kuitika muna 1976 apo United States yakapemberera makore mazana maviri. Hamacher Hall inotora chikamu mumoyo weiyi nharaunda inobudirira. Zviitiko zvakawanda zvemunharaunda uye imwe nguva yekudya kwemanheru inogona kunakidzwa munzvimbo ino yenhoroondo. Peppered nemaresitorendi uye zvitoro, uyu mudiwa wedu wekumaodzanyemba muJackson County mutsa.
Seymour inowanikwa nyore nyore paKubuda pa50 paI-65, US 50, US 31 uye Indiana 11. Meedy W. Shields nemukadzi wake Eliza P. Shields vakanyoresa nzvimbo yeguta reSeymour musi waApril 27, 1852. Seymour yakakura nekukurumidza kuwedzerwa kweOhio neMississippi Railroad muna 1854 uye munguva pfupi yakazove guta rakakura kwazvo muJackson County. Seymour inopa maindasitiri, kutenga, pekugara, kudya uye makuru mhemberero uye zviitiko, kusanganisira iyo Seymour Oktoberfest, iyo inopa rukudzo kuJackson County yeGerman nhaka. Rock'n Roll Horo yeMukurumbira inductee John Mellencamp akaberekerwa muSeymour, uye vashanyi vanogona kutsvaga akawanda mamaki munharaunda yese. Seymour zvakare inzvimbo yekutamba kwekutanga kwechitima kubiridzira neveko, inozivikanwa Reno Gang. Tarisa vhidhiyo yenyaya nekudzvanya pano. Dhorobha rakakura rinopa mikana yakawanda asi harirasikirwe neguta diki iri.
Medora iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweJackson County uye inopa maonero anofema uye iyo dhorobha diki rinonzwa. Mira pedyo nebhiriji refu refu rakavharwa muUnited States, riri paIndiana 235 kana kuona nhoroondo yeMedora Brick Plant. Shamwari dzeMedora Yakavharwa Bridge inoronga Kudya kwepagore paBridge, inova yakasarudzika yekudyira pabhiriji mukuwedzera kune yakanyarara auction uye varaidzo. Dzvanya pano kuti uverenge nezvekudya kwemanheru. Medora ndiyo epitome yekugamuchira vaeni uye izvo zvinoonekwa panguva ye Medora Anoenda Pink mutambo muna Gumiguru kana iyo Mutambo weKisimusi weMedora muna Zvita. Medora inowanikwa kubva kuUS 50 kana Indiana 235.
Vallonia ndiyo yaive yekutanga kugarwa muJackson County uye yaitove mukumhanyisa kuti ive capitol yekutanga yenyika. Vallonia inowanikwa kunze kwechigaro chedunhu uye inowanikwa kubva kuIndiana 135. Fort Vallonia chiyeuchidzo chenhoroondo yeVallonia mukutanga kwema1800 uye inouya ichirarama muna Gumiguru panguva ye Fort Vallonia Mazuva mutambo. Zvikomo uye mapfundo zvinoonekwa kubva kuVallonia uye misika yakati wandei yepurazi uye zvigadzirwa zvinomiririra zvinogona kutenderedzwa nenzvimbo, iyo inozivikanwa kwazvo neinonaka cantaloupe uye visi.
ongorora nhoroondo yeJackson County
Chimwe chezviitiko zvedu zvikuru kweanopfuura makore makumi matanhatu yave iri Brownstown Speedway, iri kuJackson County Fairgrounds. Mujaho unoitwa mwedzi misere kunze kwegore munzira yevhu, uye isu tinopa akasiyana makirasi. Vashanyi vanogona zvakare kuongorora nhoroondo yeJackson County kune chero emamuseum edu matanhatu, kusanganisira iyo Freeman Field Army Airfield Museum uye iyo Fort Vallonia Museum. Nhoroondo dzekare dzinogona kuongorora basa rakaitwa naJackson County mu Underground Railroad, iyo yakabatsira varanda vakapukunyuka kusvika parusununguko. Kune zvakare kune akati wandei enhoroondo enzira, akavharidzirwa mabhiriji, uye akapoterera matura evashanyi kuti vafare.
Vadi vemifananidzo vanonakidzwa
Yemunharaunda Chiitiko Chiitiko
Vadi vemifananidzo vachanakidzwa nekushanyirwa kuJackson County dzakasiyana hunyanzvi kuunganidzwa. Iyo Southern Indiana Center yeiyo Arts, Swope Art Unganidzo, uye Brownstown Fund yeZvivakwa zvese zvinopa mutsika yenzvimbo yacho. Vashanyi vanokwanisawo kuenda kunoratidzwa kune imwe yenharaunda dzemitambo uye vanofamba nzira yehunyanzvi kuti vaone mamwe emuno maartist.
ONA CHITSAUKO CHEMAITO
kutandara kwekunze pakunaka kwazvo
Kune vedu vanofarira vekunze, Jackson County inopa dzinoverengeka sarudzo dzekuvaraidza. Muscatatuck National Wildlife Refuge inopa kuvhima, hove uye shiri yekuona mikana. Kunyangwe iri muJackson-Washington State Forest, iyo Starve Hollow State Recreation Area kana iyo Hoosier National Forest unogona kusarudza musasa kwakakodzera imba yako-kure-kubva kumba kwekushanya. Kuchova bhasikoro, kukwira uye kukwira mabhiza inzira dzakakurumbira dzekushanyira idzi nzvimbo dzisina kubatwa, sezvo dzichitenderera mazana ezviuru emaeka. Kune mushanyi anofarira zvemitambo, isu tinopawo yakanakisa gorufu.